Olana US Political System
Mino izany sa tsia, misy tokoa ny lalàna mifehy ny mpikomy
Ao amin'ny valim-pifidianana ho an'ny besinimaro, ireo mpikamabana dia mamaritra ny toerana misy ny alikaola sy ny fako nokleary. Isaky ny fifidianana, ireo vondrona mpanao politika izay tsy manambady dia tsy tokony "hividy" ny mpomba ny mpanohitra, fa matetika no manao izany.
Raha fintina, ireo mpanolotsaina dia mandray vola avy amin'ny orinasa na tombontsoa manokana handresena ny vato sy ny fanohanan'ny mpikambana ao amin'ny Kongresy Amerikana sy ny lalam-panjakana.
Raha ny marina, ho an'ny olona maro, ireo mpikomy sy ny zavatra ataon'izy ireo dia maneho ny tena anton'ny kolikoly ao amin'ny governemanta federaly .
Saingy raha toa ka toa tsy afa-miserasera ny mpikomy sy ny fitaoman-dry zareo ao amin'ny kaongresy dia tsy maintsy manaraka ny lalàna izy ireo. Raha ny marina, maro amin'izy ireo.
Atera: Ny lalàn'ny lobbying
Na dia namorona lalàna maromaro mifehy ny mpikomy aza ny vaomieram-panjakana tsirairay, dia misy lalàna federaly roa manokana mametra ny hetsika ataon'ny lobbyists mikendry ny Kongresy Amerikana.
Neken'ny Kongresy ny lalàna momba ny Lobbying Disclosure Act (LDA) tamin'ny taona 1995, noho ny fahatsapana fa ilaina ny fanamafisana ny lalan-java-manahirana sy ny tompon'andraikitra amerikana. Araka io lalàna io dia takiana amin'ny fisoratana anarana amin'ny mpikaroka rehetra Tranon'ny solontenam-panjakana sy ny Sekreteran'ny Antenimieran-doholona .
Ao anatin'ny 45 andro aorian'ny fampiasana orina ho an'ny orinasa vaovao, dia tsy maintsy manoratra ny fifanekeny amin'io mpanjifany io amin'ny mpitan-tsoratry ny Loholona sy ny lehiben'ny Trano ny mpangalatra.
Hatramin'ny taona 2015, maherin'ny 16.000 ireo mpandroba federaly no voasoratra anarana ao amin'ny LDA.
Na dia izany aza, tsy ampy ny fisoratana anarana tamin'ny Kongresy mba hisakanana ny mpikomy sasany tsy hanararaotra ny rafitra hanaparitaka tanteraka ny asany.
Jack Abramoff Nandresy lahatra ny New Scandal, Law Plus
Ny fankahalàna ho an'ny mpankasitraka ny lobbyists sy ny lobbying dia tonga tamin'ny tapany tamin'ny taona 2006, rehefa nanambara fa meloka i Jack Abramoff noho ny fampiroboroboana ny indostrian'ny kazàny , ka ny sasany amin'izy ireo dia nigadra noho ny fanafintohinana.
Taorian'ilay horohoron-tany Abramoff, ny Kongresy tamin'ny taona 2007 dia nametraka ny lalàna marina momba ny fitantanana sy ny governemanta (HLOGA) izay nanova tanteraka ny fomba ahafahan'ny mpikabary mifandray amin'ny mpikambana ao amin'ny Kongresy. Vokatry ny HLOGA, voarara ny mpikirakira ny "fitsaboana" ny mpikambana ao amin'ny Kongresy na ny ekipany amin'ny zavatra toy ny sakafo, ny fitsangatsanganana, na ny fialamboly.
Eo ambanin'ny HLOGA, ireo mpampiasa lobbyists dia tokony hametraka tatitra momba ny Lobbying Disclosure (LD) isan-taona manambara ny anjara biriky nentin'izy ireo tamin'ny hetsika fampielezan-kevitra ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy na ny fandaniana hafa izay ezahan'izy ireo manao izany fa mety handray soa amin'ny mpikambana ao amin'ny Kongresy.
Ny tena tadiavina dia ny tatitra takiana:
Ny tatitra LD-2 dia mampiseho ny hetsika rehetra momba ny fikarakarana ho an'ny fikambanana tsirairay nosoratana ho solontenany dia tsy maintsy averina amin'ny telovolana; ary
Ny tatitra LD-203 izay manambara politika "fanomezana" ho an'ireo mpanao politika dia tokony halefa indroa isan-taona.
Inona no azon'ireo mpiharo lobaka amin'ny mpanao politika?
Ireo mpandraharaha mpanafika dia avela hampiditra vola amin'ny mpanao politika federa eo ambanin'ny fetran'ny fampielezan-kevitra napetraky ny tsirairay . Nandritra ny vanim-potoanan'ny fifidianana federaly amin'izao fotoana (2016) izao dia tsy afaka manome mihoatra ny 2 700 dolara ho an'ireo kandidà rehetra sy $ 5,000 amin'ny Politika Komitin'ny politika (PAC) amin'ny fifidianana tsirairay.
Mazava ho azy fa ny vola sy ny vaton'ny mpikambana ao amin'ny orinasa sy fikambanana ataon'izy ireo dia ireo mpanao fihetsiketsehana "mpandray anjara" be mpankasitraka indrindra. Tamin'ny taona 2015 ohatra, ny mpikambana efa ho 5 tapitrisa ao amin'ny National Rifle Association dia nanome 3.6 tapitrisa dolara amerikana ho an'ireo mpanao politika federaly nanohitra ny politikam-pihenjanana henjana.
Ankoatr'izay dia tsy maintsy mandefa tatitra isan-telovolana ny mpanjifany, ny saram-pindram-bola azon'izy ireo avy amin'ny mpanjifa tsirairay ary ny olana atrehin'izy ireo ho an'ny mpanjifa tsirairay.
Ireo mpankasitraka izay tsy manaja ireo lalàna ireo dia mety hiatrika fitsarana sivily sy sazy araka izay voafaritry ny biraon'ny mpampanoa lalàna amerikana .
Sazy ho an'ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny lalàna
Ny Sekreteran'ny Antenimieran-doholona sy ny Mpitantana ny Trano, miaraka amin'ny Biraon'ny Fampanoavana ao Etazonia (USAO) dia tompon'andraikitra amin'ny fiantohana fa ny mpikomy dia manaraka ny lalàna LDA momba ny famoahana ny asa.
Tokony ho hitan'ny Sekreteran'ny Antenimieran-doholona na ny Mpitantana ny Trano ny mpanoratra ny tsy fanekena ny hanaraka azy. Raha tsy manome valiny mahafa-po ny mpangalatra, ny Sekreteran'ny Antenimieran-doholona na ny Mpitantana ny Trano dia manondro ny raharaha any Etazonia. Ny USAO dia manadihady ireo fakana an-tsoratra ireo ary mandefa fanazavana fanampiny tsy miankina amin'ny mpangalatr'olona, ​​mangataka izy ireo handefa ny tatitra na hamarana ny fisoratana anarana. Raha tsy mandray valiny i USAO aorian'ny 60 andro, dia manapa-kevitra raha hanenjika ny raharaha sivily na ny heloka bevava amin'ny mpanao heloka bevava.
Fitsarana sivily iray dia mety hitondra any amin'ny sazy miisa 200.000 dolara isaky ny fandikan-dalàna, raha toa kosa ny faharesen-dahatra an-kerisetra -jeren'ny olona raha toa ka tsy mahalala ny kolontsaina sy ny kolikoly no mety hiteraka am-ponja 5 taona.
Eny eny, misy ny lalàna ho an'ireo mpikomy, saingy firy ireo mpikomy ireo no manao ny "zavatra marina" amin'ny fanatanterahana ny lalàna momba ny fampahalalam-baovao?
GAO Tatitra momba ny fanarahan-dalàna ataon'ny Lobbyists amin'ny Lalàna
Tamin'ny fanaraha - maso natao tamin'ny 24 martsa 2016 , dia nanambara ny Biraon'ny Governemantan'ny Governemanta (GAO) fa nandritra ny taona 2015, ny ankamaroan'ireo mpikirakira federaly voarakitra dia nanao tatitra momba ny fampahalalam-baovao izay misy ny angona fototra takian'ny Lobbying Disclosure Act of 1995 (LDA).
Araka ny fanaraha-maso GAO, ny 88% -n'ny mpikomy dia nametraka ny tatitra voalohan'ny LD-2 araka izay takian'ny LDA. Amin'ireo tatitra voarakitra an-tsoratra, 93% dia nahitana antontan-taratasy ampy momba ny fidiram-bola sy ny fandaniana.
Tokony ho 85% -n'ny mpikatroka no nametraka araka ny tokony ho izy ireo lahatsoratry ny LD-203 tamin'ny taon-dasa, izay nanambara ireo fanomezana fanentanana.
Nandritra ny taona 2015, ireo mpomba ny federasiona federaly dia nanangona tatitra momba ny fampahalalam-baovao 45.565 LD-2 amin'ny $ 5,000 na mihoatra amin'ny hetsika fandraisam-bahiny, ary 29.189 LD-203 ireo tatitra momba ny fanomezana politika ara-politika federaly.
Ny GAO dia nahita fa, toy ny tamin'ny taona lasa, ireo mpomba ny lobbyists dia nanohy nanambara tsara ny fandoavam-bola ho an'ny "toeram-ponenana" sasany, toy ny karama fandaharam-pianarana ho an'ny kongresy na sampan-draharaham-pitantanana sasany izay nomena ho anisan'ny mpandray anjara "lobbyists" ho an'ireo mpanao lalàna.
Ny fanaraha-maso GAO dia manombatombana fa ny 21% amin'ny tatitra rehetra LD-2 napetraky ny mpomba ny mpanohana ny taona 2015 dia tsy namoaka ny karama omena toerana iray farafahakeliny, na dia teo aza ny ankamaroan'ny mpikomy tamin'ny GAO fa nahita ny fitsipika momba ny fitaterana ny asany "Tena mora" na "somary mora" hahatakatra.
Ny Platform Libertarian Party
Momba ny Antenimieran-doholona Amerikana
Ny tranon'ny solontenan'i Etazonia
Momba ny tolo-kevitry ny teti-bolan'ny Filoham-pirenena
Ahoana no anaovana ny rafi-panjakana momba ny fifidianana amerikana
Fomba fijery fohy momba ny tanàna sivily
Ny rafitra antoko roa amin'ny politika Amerikana
Ny fisafidianana ireo solontenan'ny Antoko Politika
Feno ny fahabangan-toerana ao amin'ny Kongresy Amerikana
Inona ny Bicameral Legislature ary Nahoana Ny Amerikana no Iray?
Bilaogy ao amin'ny Kongresy Amerikana
Ho fanomezam-boninahitra ny fiakarana
Ny US Active Wildfire Reporting and Maps
Ny mariky ny Lotus
Famerenana ny valin'ny fanontanina amin'ny Access 2013
Fantaro ny Geology amin'ny Plateau Tibetana
Saripika Photo SUNy Potsdam
FAHADIMORANA MISY MISY EXPERY MIX
Olana ho an'ny mpampianatra izay mametra ny fahombiazany
Ny Chaos, avy amin'i Charivarius (Gerard Nolst Trenité)
Fito matevina amin'ny tranga amerikana
Ny fiheveran'ny rindrina sy ny rindrina eo amin'ny tontolon'ny biby
Ny Doobie Brothers: Mandeha ny Mainstream ny mpilalao bikerika
Top Punk Rock sy Hardcore Bands amin'ny '80s
Inona no Hitranga Amin'ny Biby Raha Mandeha Ve Ny VEHIVAVY?
Ady lehibe faharoa: P-38 tselatra
Mpanondro maso: Jennifer Bartlett
Ady An-trano Amerikanina: Jeneraly Jeneraly Joseph Wheeler
Famaritana amin'ny ankapobeny sy ny ohatra
Top 10 Nadikan'i Adam Lambert
Serasera (fitsipi-pitenenana sy fehezanteny)
Fifandonana Lehibe Lehibe nandritra ny ady an-trano Amerikana